Wararka - Bandhigyada HK Qurxinta
Sannadkii 2019, shirkadeena, Jiangxi Ningheda New Material Co., Ltd., waxay kaqeybgashay Bandhiggii Juun Hong Kong iyo Sebtember Hong Kong Jewelry Fair isla waqtigaas, waxayna qaabishay soosaarayaal iyo ganacsato badan oo ka kala yimid dalal kala duwan oo ku howlan warshadaha dahabka. Bandhigga, macaamiisha waxaa ka buuxay ammaan xagga alaabtayada. Macaamiil badan ayaa si toos ah amarrada u soo rogay ka dib markay soo noqdaan, waxayna ilaaliyeen xiriir iskaashi illaa iyo hadda.
Wax soo saarkayagu waxay leeyihiin habsami u socodka kuleylka iyo u adkeysiga heerkulka sare. Inta lagu jiro isticmaalka heerkulka sare, isugeynta kororka kuleylka waa yar yahay, waxayna leedahay caabbinta culeyska qaarkood ee kuleylka degdega ah iyo qabowga. Waxay leedahay iska caabin daxal oo xoog leh oo ku saabsan asiidhyada iyo xalalka alkaline, waxayna leedahay xasilloonida kiimikada oo aad u fiican.
Sababtoo ah sifooyinka sare ee sare, waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa dhalaalinta birta aaladaha qalabka isku dhafka ah iyo dhalaalida biraha aan birta ahayn iyo alloysyadooda ku jira metallurgy, casting, mashiinada, kiimikada iyo qeybaha kale ee warshadaha. Waxayna leedahay saameyn farsamo iyo dhaqaale oo wanaagsan.
1. Sifooyinka alaabta ceeriin: daahirnimo sare, cufnaan sare, caabbinta heerkulka sare ee wanaagsan, iska caabbinta soo-kabashada, nabaad-guurka nabaad-guurka, iska caabinta qiiqa, caabbinta kuleylka kuleylka;
2. Adkaysiga heerkulka sare, caabbinta daxalka, nolosha adeegga oo dheer;
3. Tikniyoolajiyadda farsamaynta horumarsan, dulqaadka iyo muuqaalka ayaa ka wanaagsan heerarka macaamiisha;
Habayn xirfadeed iyo adeegyo taageero ah ayaa lagu bixin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Ku saabsan Carwada HK Qurxinta:
Fayfooliyo dhammaystiran oo isku dhejisan oo bixiya wadarta xalka baahiyahaaga caalamiga ah
Madal ganacsi oo gaar ah oo lagu soo bandhigayo, dhacdooyin, warbaahinta dahabka iyo xalal dhijitaal ah oo loogu talagalay in loogu adeego dahabka caalamiga ah iyo warshadaha dhagaxyada.
Bandhigyada dahabka adduunka. Carwooyinka ugu xirfada badan ee la soo bandhigo oo ay ka mid yihiin in ka badan 200,000 oo wax iibsadayaal ganacsi ah iyo in ka badan 9,700 oo carwo-bixiyeyaal ah, oo ay ku jiraan Sebtember Hong Kong Jewelery & Gem Fair, oo ah dhacdada koowaad ee adduunka ee dahabka wanaagsan
Dahabka Warbaahinta & Xalka Dijital ah. Qeyb daabacan & alaabooyin dijitaal ah, oo ay kala hogaaminayaan JNA iyo JewelleryNet.com oo ka hadlaya horumaradii ugu dambeeyay aragti caalami ah iyo sidoo kale isu keenista xirfadlayaal dahabka ka kala socda adduunka oo dhan boggeena hormoodka ah ee dahabka B2B.
Dhacdooyinka Astaamaha Sare. Abaalmarinta JNA ee sannadlaha ah mid ka mid ah barnaamijyada abaalmarinta ugu caansan ee lagu aqoonsado hal-abuurnimada iyo heer sare ee warshadaha.
Doonta Garaafka Semi-Wareegga ah, Doonta Garaafka Labaad, Weelka Kaarboon Garaafka, Garaafka Sawirka, Qaybaha Dayactirka Graphite, Iskuduwaha Garaafka,